रुस किन चाहन्छ अमेरिकाको फ्लोरिडामा आणविक आक्रमण गर्न ? हेर्नुस यस्तो छ रुसको भित्रि उदेश्य ! | kantipurplus.com
रुस किन चाहन्छ अमेरिकाको फ्लोरिडामा आणविक आक्रमण गर्न ? हेर्नुस यस्तो छ रुसको भित्रि उदेश्य !
एजेन्सी: रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बिहीबार परमाणु हतियारको नयाँ प्रविधि विश्वसामू ल्याएका छन् । यस क्रममा एक भिडियो ग्राफिक्समा अमेरिकाको फ्लोरिडामा मिसाइल बर्साउँदै गरेको दृश्य पनि देखाइएको छ।
तर यहाँनिर उठ्ने प्रश्न भनेको रूस परमाणु युद्धको स्थितिमा सनशाइन स्टेट फ्लोरिडालाई किन लक्ष्य बनाउन चाहन्छ ?
फ्लोरिडामा वल्ट डिज्नी वर्ल्ड र एभरग्लेड्स नेशनल पार्क जस्ता ठुला पर्यटकीयस्थल छन् । यसका साथै यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको मार ए लागो रिसोर्ट जस्ता हाई प्रोफाइल टार्गेट पनि रहेका छन् ।
त्यस्तो के छ फ्लोरिडामा ?
अमेरिकी रक्षा विभागका एक प्रवक्ताले बताए अनुसार पुटिनको यी अभ्यासबाट आश्चर्य मान्नुपर्दैन । रूसी खतरालाई महत्वहीन बताउँदै पेन्टागन प्रवक्ता ड्याना व्हाइटले भने, “अमेरिकी जनता ढुक्क भए हुन्छ, हामी पुरै तयारी अवस्थामा छौँ ।’
पुटिनको यस भिडियो एनिमेशनमा कयौँ परमाणु हतियारलाई फ्लोरिडातर्फ गइरहेको देखाइएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पको फ्लोरिडास्थित मार ए लागो रिसोर्टमा कयौँ परमाणु बंकर रहेका छन् । जहाँ राष्ट्रपति बनेपछि उनले कयौँ बिदाको समय बिताइसकेका छन् ।
सन् १९२७ मा निर्मित मार ए लागोमा रहेका बं‌करमध्ये तीन कोरियाली युद्धका क्रममा स्थापना गरिएको थियो । त्यहाँबाट केही माइलको दुरीस्थित वेस्ट पाम बीचमा ट्रम्पको गल्फ कोर्समा (अमेरिकी म्यागजिन स्कवायरका अनुसार दोस्रो सुरुङ तल) एक अर्को बम सेल्टर रहेको छ ।
दोस्रो बंकर राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीका लागि बनाइएको थियो । जुन मार ए लागोबाट धेरै टाढा छैन । पिनट द्विपमा अवस्थित यस बंकर भन्दा केबल १० मिनेटको दुरीमा पाम बीच हाउस छ । जहाँ केनेडी नियमित आएर आराम गर्थे ।
विशेषज्ञका अनुसार यी बं‌कर जति शानदार तरिकाबाट बनाइएपनि सीधै हमलाको अवस्थामा कुनै पनि सुरिक्षत हुन भने सक्दैनन् । एक अर्को निशाना अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्ड (सेन्टकम) हुन सक्छ । जसको मुख्यालय ट्याम्पाको के म्याक्डिल एयरबेसमा रहेको छ ।
सेन्टकममाथि मध्य-पूर्व, मध्य एसिया र उत्तर अफ्रिकाका केही भूभागमा अप्रेशनको जिम्मेवारी रहेको छ । तर विश्लेषकले भने परमाणु युद्धको स्थितिमा मुख्य लक्ष्य फ्लोरिडा भने नहुने बताएका छन् ।
रुसको प्राथमिकता अन्तै ?
म्याथ्यू क्रोएनिग आफ्नो किताब ‘द लजिक अफ अमेरिकन न्युक्लियर स्ट्र्याटेजी’ लेख्छन्, ‘रूसको प्राथमिकता अमेरिकालाई कडा जबाफी कारबाही गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउने नै हुनेछ ।’
‘यो भन्दा धेरै सम्भावना भनेको मोस्को मोन्टानेको मालस्टर्म एयरफोर्स बेस, नर्थ डकोटामा मिनोट एयरफोर्स बेस, ओमाहा, नेब्रास्का र ओफट जस्ता एयर फोर्स बेसलाई लक्ष्य बनाउने हुनेछ’, उनले भनेका छन् ।
क्रोएगिन लेख्छन्, ‘रूस सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण दुई अमेरिकी पन्डुब्बीको ठेगाना, वासिंगटनको बांगोर र जर्जियाको किंग्स बे का साथै देशभरमा फैलिएका ७० अन्य अमेरिकी सैन्य अड्डालाई ध्वस्त बनाउन चाहन्छ ।’
‘त्यसैगरी रुसले यहाँको औद्योगिक क्षमतालाई नष्ट गर्न र ठुलो परिमाणमा क्षति गराउनका लागि सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको अमेरिकी शहरमा दुई दुई मिसाइल हान्न सक्छ’, उनले भनेका छन् ।
इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटजिक स्टडिजका मार्क फिट्जप्याट्रिकले बिबीसीसँग भने, ‘फ्लोरिडामा हमलाको भिडियोसँग युद्ध नीतिको कुनै सम्बन्ध छैन । यो एक सन्देश हो, जसको सं‌केत मात्रको रुपमा यो भिडियो बाहिर ल्याइएको हो ।’
Posted in: अन्तराष्ट्रिय
ओली सरकारले गर्ने भयो बन्द उद्योग संचालन, ओलीका मन्त्री यादवले गरे यस्तो घोषणा
केपी ओली शक्तिशाली बन्न थालेपछि बिरोधमा उत्रियो कांग्रेस, यस्तो छ माग